Jabuuti: Shan arrimood oo ku saabsan duuliye Fu’aad Yuusuf Cali | Berberanews.com
Home WARARKA Jabuuti: Shan arrimood oo ku saabsan duuliye Fu’aad Yuusuf Cali
Dalka Jabuuti maalmahanba waxaa ka taagnaa rabshado salka ku hayey xarigga Duuliye Fu’aad Yuusuf Cali oo dowladda u xiran oo muuqaal laga soo duubay ay ka dhasheen bannaanbaxyo caasimadda Jabuuti iyo magaalooyin kalaba ka dhacay.
1. Dacwad khiyaamo qaran in lagu soo oogay
Xeer ilaaliyaha dalka Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali oo BBC u warrmay ayaa sheegay in Duuliye Fu’aad Yuusuf Cali uu yahay muwaadin jamhuuriyadda Jabuuti u dhashay oo ka tirsan oo ciidamada cirka.
“Isaga oo direyskiisa wata ayuu tagay xerada ciidamad cirka jabuuti wuxuuna isku dayay inuu si qarsoodi ah diyaarad u duuliyo iyada oo aan war laga qabin uu u duuliyo waddanka cadawga ah ee uu dagaalka na dhex maray ee Eritrea, balse diyaaraddii baa u kici weyday dabadeed si qarsoodi ah ayuu dalka itoobiya ugu gudbay isaga oo Eritrea u soo jeeday halkaasuuna muuqaal isaga soo duubay Fu’aad Yuusuf cali wuxuu u xiran yahay dambiga ah khiyaama qaran oo uu u xiran yahay” ayuu yiri xeer ilaaliyaha Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali.
Waa markii ugu horreysay oo eedeyntan laga maqli dowladda Jibuuti. Xeer ilaaliyaha ayaana arrintasi qiray. Ma jirta wax caddeyn ah oo ay dowladda soo bandhigtay oo ka marag fureysa eedeyntan. Qareenka fu’aad ayaa ku gacanseyray eedeyntaasi.
2. Muddo intee dhan ayuu dowladda Jabuuti u xiran yahay?
Duuliye Fu’aad Yuusuf Cali waxaa Jamhuuriyadda Jabuuti dib ugu soo celisay dowladda Itoobiya taasoo ka careysiisay qurbajoogta reer Jabuuti iyo Siyaasiin badan oo dibadda ku nool iyaga oo aad u dhaleeceeyey dib u celinta Fu’aad ee ay Itoobiya ku dhaqaaqday iyadoo uu dalbaday magangalyo.
Bishii Apriil 22-keedi ayey Itoobya Duuliye Fu’aad ku so wareejisay dambi baarista Jabuuti. Seddex bilood ayuu gacanta dowladda ku jiraa, kiiskasana maxkamadda waa la geeyey, sida uu sheegay xeerilaaliyaha. Wuxuu beeniyay in nolol,xun uu ku sugan yahay Fu’aad oo muqaal si qarsoodi looga soo duubay oo la soo dhigay baraha bulshada uu ku sheegay in lagu dhexhaya musqul.
“Horta waa ayaan darro oo annagaba ma jeclin ma ogtahay qof dowladdii iyo maxkamaddii u xiran darxumo ama dhib lagu sheego, habase ahaatee…kamaradda haddii musqul la dul dhigo musqul unbey ku tuseysaa, Fuaad wuxuu ku xiran yahay qol musqul leh musqushiiba Kameradda dul dhigay laakiin qolkaasi isaga laftiisana wuxuu qirta in talefoon loo soo gudbiyey ilaa 5-ta may uu muuqaalka duubanayey” ayuu yiri xeer ilaaliyaha Jabuuti Jaamac Suleymaan.
3. Caddaalad ma heli doonaa Fu’aad?
Mudaharaadyo xooggan oo ka dhashay xarigga Duuliye Fuaad Yuusuf cali ayaa ka socda Jabuuti iyada oo ay shacabku dalbanayaan in la sii daayo duuliyaha iyada oo shacabku aaminsan yihiin inuu dulmi u xiran yahay.
“Waxaan xaqiijinayaa oo aan dammaanad qaadayaa Fu’aad inuu caddaalad madax bannaan oo xaq ah uu heli doono dambigiisana si saxah ay maxkamaddu u xukumi doonto” ayuu yiri xeer ilaaliyaha Jabuuti Jaamac Suleymaan” ayuu yiri.
4. ‘Caddaalad Darro ayuu ka cararayay’?
Qareenka u doodaya Fu’aad ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uu Xeer Ilaaliyaha Guud ee dalkaasi uu ku soo oogay Fu’aad Yuusuf Cali oo ah inuu galay khiyaano qaran.
Garyaqaan Zakariye Cabdullaahi oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in Fu’aad oo hadda xanuunsanaya aanan la geyn dakhtar isla markaana jirdil loo geystay.
“Diyaarad buu la baxsanayey wax sal leh ma aha qofka marka dacwad lagu soo oogaya waxyaabaha u dhow ayaa loo dhaweeyaa laakiin ninkaas Fu’aad ee aad aragteen ee dhibaatada ku dhacdayee meesha musqusha ah ku jira iskumuu dayin inuu diyaarad waddanka kala baxo” ayuu yiri Garyaqaan Zakariya oo Fu’aad u doodaya.
“Waxaan idiin sheegayaa BBC ninkaasi sharcidaruu ku xiran yahay, caddaalad xumo ayuu ka cararayey, cagajugleyn buu ka cararayey, dhibaatooyin askarta si gaar ah loogu hayey ayuu ka cararayey.”
Zakariye waxa uu shegay in isaga iyo ehellada Fu’aad aan loo oggoleyn inay booqdaan. Waxa uu sjheegau in tan iyo markii la soo qabtay uu hal mar xabsiga kula kulmay
“Fu’aad markaan u tagay waxaan ku arkay nin argagaxsan, dhibaata ka muuqato oo wada nabar ah, Jabuuti waa waddan kulul, qol aad arkeysid oo muqsul ah ku jira oo weliba sida wajigiisa ka muuqatay uuna ii sheegay uu yahay nin adkeysanaya uu yiri waxba ma leh waan iska adkeysanayaa laakiin dhibatadu wa ataa wa adiga arkaya sidan ahay” ayuu yiri.
5. Mucaaradka oo dalbay in Fu’aad si Degdeg loo sii daayo
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee RAAD ee dalkaasi Jabuuti, Cabduraxmaan Maxamed Geelle, ayaa dowladda dalkaasi ugu baaqay in ay xabsiga ka sii deyso duuliyahaasi isla markaana cabashada shacabka ay ka jawaabto.
Cabduraxmaan waxaa kale uu ka digay in dalka aan la burburin maadaamaa buu yiri mudaharaadyo si fudud ku billaawday ay ku burbureen waddamo badan, sidaa darteedna xukuumadda looga baahan yahay inay xal la timaaddo.
“Kacdoonkan billaabmay waxay dadku ka dhiidhiyeen, oo ay ka caroodeen tacaddiga, caddaalad darrada iyo sida xuquuqal isnaasnka ka baxsan ee lagula kacay askariga muwaaddinka reer Jabuuti oon ognahay xaaladdiisa caafimaad iyo dhibta uu ku jiro, marka waa iney waajibkooda gutaan oo ay askarigaasina ay si dhaqsa ah ay u soo sii daayaan dalka midnimadiisana ay ka shaqeeyaan ma aha iney ololiyaan waddanka”.
Previous articleSomaliland: 46 qof oo laga helay Covid-19 iyo 2 qof oo u geeriyooday
Next articleTaliyaha Guutada 7aad ee ciidanka qaranka oo gaadhay Buuhoodle